अम्मल छाड्ने कोशिसमा हुनुहुन्छ ? यसरी छाड्नुस् | | Nepali Health
अम्मल छाड्ने कोशिसमा हुनुहुन्छ ? यसरी छाड्नुस्
२०७३ वैशाख ५ गते ७:३८ मा प्रकाशित
काठमाडौँ – नयाँ वर्षमा तपाईंले चुरोट, खैनी, रक्सीजस्ता अम्मल त्याग्ने घोषणा गर्नुभएको छ ? यदि छ भने एकपटक शान्त दिमागले सोच्नुस् त, तपाईंले जीवनमा कतिपटक यस्तो घोषणा गर्नुभएको छ ?
विज्ञहरूका अनुसार धूमपान, खैनी, मदिराका अधिकांश अम्मलीहरू जीवनमा धेरैपटक अम्मल त्याग्ने घोषणा गर्छन् । तर यो दुई तीन दिनदेखि केही साता, महिना नपुग्दै बिर्सन्छन् । फेरि अम्मल प्रयोग गर्छन् । अनि फेरि अर्को वर्ष अम्मल त्याग्ने नयाँ संकल्प गर्छन् ।
उत्प्रेरणा कडा रूपमा जागृत नभएको अवस्थामा बानी छोडे पनि पुन: अम्मलमा फर्किने सम्भावना समेत बढी रहेको उनी औंल्याउँछन् ।
अम्मल एक्कासि वा बिस्तारै गरी दुई प्रकारले त्याग्न सकिने उल्लेख गर्दै डा. ओझा भन्छन्, ‘बिस्तारै कम मात्रामा उपयोग गर्दै समय अन्तराल बढाउँदै लगेर एक निश्चित अवधिमा बन्द गर्न सकिन्छ ।’
उनका अनुसार एक्कासि छोडदा ‘विथड्रल’ (नशालु पदार्थको प्रतिकारका लक्षण)थेग्न सक्ने हुनुपर्छ । एकदेखि दुई साताभित्र अम्मल पूर्ण छाड्न हरेक दिन ५ देखि १० प्रतिशतको हिसाबले उपयोग गर्ने हिसाबले मात्रा घटाउँदै जानुपर्छ । यसरी १० दिनमा शून्यमा झार्नु वैज्ञानिक रूपले राम्रो र बिना जोखिमको उपाय रहेको डा. ओझा बताउँछन् ।
एक्कासि रक्सी छाडदा अन्य अम्मलको दाँजोमा समस्या देखिन सक्छ । निद्रा नलाग्ने, छटपटी, मदिरामै ध्यान हुने लगायत ‘विथड्रल’ लक्षण देखा पर्न सक्छन् । कोही बेहोस पनि हुन सक्ने औंल्याउँदै डा।ओझा यस्ता व्यक्तिले भने बिस्तारै छाड्नु राम्रो हुने बताउँछन् ।
मदिराका अम्मलीले डाक्टरको सल्लाहमा ‘नालट्रेक जोन’ नामक औषधि ६ महिनासम्म सेवन गरे पुन: अम्मलमा फर्कने सम्भावना धेरै न्यून हुने उल्लेख गर्दै डा. ओझा भन्छन्, ‘अम्मलको दाँजोमा यो औषधि खासै महँगो पनि छैन, एक दिनको करिब ५०/६० रुपैयाँ पर्छ ।’
आज प्रकाशित कान्तिपुर दैनिकमा अतुल मिश्रको समाचार
नर्भिकको घोषणा, ‘थ्रि टेस्ला एमआरआई, १२८ स्लाइस सीटी र टेष्टट्युव बेबी छिट्टै ल्याउँदैछौँ ‘